मनोरञ्जन | mulkhabar.com
नेपाल अाईडल र बुगिवुगिका कलाकारले नचाए कतारमा नेपाली
दाेहा, २४ जेठ – नेपालमा गित र नाचमार्फत दर्शक र श्राेताकाे मन जित्न सफल नेपाल अाइडल र बुगिवुगिका कलाकारहरूले कतनरकाे राजधानी दाेहामा पनि नेपालीलाई भरपुर मनाेरञ्जन दिलाएका छन् । कतारको सनैयास्थित ग्राण्ड मलको एसियन टाउन, एम्पिथियटरमा विहिबार साँझ भएको ‘नेपाल आइडल, बुगीवुगी ईद फेस्टिवल’ को कार्यक्रममा उनीहरूले अाफ्नाे प्रस्तुति दिएका थिए । नेपालबाट आमन्त्रित राष्ट्रिय एबं […]
Posted in एक्सक्लुसिभ समाचार,मनोरञ्जन,मुख्य समाचार,साहित्य / कला मुख्य Read More »
यी ७ कुरा कसैलाई नभन्नु !
काठमाडौं, २६ चैत – हामीले यहाँ प्राचिन समयको यस्ता १० कुरा संकलित गरेका छौं, जो पौराणिक ग्रन्थमा मिल्छ । हुन त अहिले कतिपय अवस्थामा यी कुराको महत्व नहुन पनि सक्छ । भनिन्छ नि, आफ्ना हितैषीलाई एवं एकदमै मिल्ने साथीलाई पनि जीवनका सबै गोपनियता खुलाउनु हुँदैन । किनभने भोलिका दिनमा ति हितैषीसँग हाम्रो सम्बन्ध बिग्रन सक्छ […]
Posted in मनोरञ्जन,मुख्य समाचार,साहित्य / कला मुख्य Read More »
विश्वका प्रमुख याैन बजार कुन् कुन् देशमा ?
काठमाडौं – पछिल्लो समयमा सहबास बजार विश्वमा नै फस्टाउँदै गएको छ । कतिपय देशहरुमा यौन बजार वैध छ भने कतिपय देशहरुमा बर्जित भएपनि गोप्य रुपमा सहबास बजार फस्टाइरहेको छ । ती मध्ये केही सेक्स बजार यस्ता छन् । थाइल्यान्ड – थाइल्यान्डको राजधानी बैंकक संसारकै सबैभन्दा ठूलो यौन बजार हो । यहाँ करिब ३० लाखजति यौन […]
Posted in अनौठो संसार,मनोरञ्जन Read More »
परदेशीको बास्तबिक पिडा बोकेको गीत “सेतो साडी” सार्बजिनिक
लिला श्रेष्ठ।‘…घर बग्यो बाढीमा, छोरो खाडीमाफर्क्यो रातो बाकसैमा, बुहारी छिन् सेतो साडीमा…’ कामको खोजी र केही धन कमाएर परिवारलाई सुखका साथ राख्ने अभिलाषा बोकेर रुँदै घर अनि स्वदेश छोड्न बाध्य नेपालीहरुको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको छ । स्वदेशमा रहेको बढ्दो बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरतालगायतका कारण विदेशिन बाध्य नेपालीहरु लाखौंको संख्यामा छन् । परिवारको पालन–पोषण मात्रै गर्न […]
Posted in कभर स्टोरी / फिचर,मनोरञ्जन,साहित्य / कला मुख्य Read More »
नेपाल आइडल–२ को फाइनल काठमाडौंमै हुने, को बन्ला आइडल ?
काठमाडौं, १ पुस बहुचर्चीत र युवाहरुले अत्यन्त रुचाइएको नेपाल आइडल–२ को फाइनल काठमाडौंमै हुने भएको छ । काठमाडौं र पोखरामध्ये एक ठाउँमा हुने भनिएको सो फाइनल इभेन्ट काठमाडौंको नेपाल इन्जिनियरिङ क्याम्पस पुल्चोकमा हुने पक्का भएको हो । कार्यक्रमका प्रोजेक्ट हेड सुरेश पौडेलका अनुसार आउँदो ६ गते शुक्रबार नेपाल आइडल विजेता घोषणा हुने छ । साथै […]
आज स्वरसम्राट नारायण गोपालको २८ औँ स्मृति दिवस
काठमाडौं । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका स्वरसम्राट नारायण गोपालको आज २८ औ स्मृति दिवस । उनको सम्झनामा बुधबार विभिन्न कार्यक्रम गरि स्मृति दिवस मनाइदैँछ । नेपाली संगीतलाई फरक धारमा प्रस्तुत गरी कालजयी गीत गाउने सुमधुर स्वरका धनी नारायण गोपालका गीतहरु आज पनि सबैको रोजाइ बन्ने गरेको छ । ‘स्वर्गकी रानी, मायाकी खानी’, ‘आँखाको भाका आँखैले’, ‘मलाई […]
Posted in देश,मनोरञ्जन Read More »
के नेपाली श्रृङ्खला विश्व सुन्दरी हुन्छिन् ? यस्ता छन् अन्तर्राष्ट्रिय सम्भाव्यता अध्ययन
काठमाडौं । नेपाल सुन्दरी श्रृङ्खला खतिवडा विश्व सुन्दरी २०१८ को सम्भाव्यता अध्ययनको एक नम्बरमा परेकी छन् । अहिले विश्व सुन्दरी प्रतियोगिताका विभिन्न चरणका ट्यालेन्ट शोहरू चलिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्भाव्यता अध्ययनकर्ताले श्रृङ्खला नयाँ विश्व सुन्दरी हुनसक्ने जनाएका छन् । श्रृङ्खलाले यो उपाधी हात पारे नेपालले पहिलो पटक विश्व सुन्दरीको ताज पहिरिन पाउने छ । राजनीतिक पृष्ठभुमीको […]
Posted in एक्सक्लुसिभ समाचार,कभर स्टोरी / फिचर,मनोरञ्जन Read More »
प्रमोद खरेलले ल्याए यस्तो वियोगान्त गीत (भिडियोसहित)
विराटनगर । ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’का जज तथा चर्चित गायक प्रमोद खरेलले वियोगान्त गीत सार्वजनिक गरेका छन् । उनको आवाजमा समेटिएको ‘रुँदा सँगै रुन्छु’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको हो । आधुनिक गीतबाट चर्चा कमाएका गायक खरेल पछिल्लो समय आफूले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै गरेको रियालिटी शोमा व्यस्त रहेको भएपनि उनको गीत आउनेक्रम बढ्दो नै छ […]
Posted in मनोरञ्जन,साहित्य / कला मुख्य Read More »